HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMashruuca Canal Istanbul
12 / 12 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Project Istanbul Canal: mashaariicda ahee Channel Istanbul Turkey ayaa sii wad in aad meel horumar daqiiqadii ugu danbeysay ee mashruuca. In kasta oo dhibbanayaashii Kanal Istanbul ay sugayaan taariikhda saxda ah ee lagu shaacin doono mashruucan, taariikhda qodista koowaad ama taariikhda qandaraaska lama shaacin. Goorma ayaa la qaban doonaa Channel Channel? Channel-ka Channel Istanbul ayaa la qaban doonaa? Goormaad tahay taariikhda qandaraaska Istanbul? Kanal Istanbul daqiiqadii ugu dambeysay iyo Kanal Istanbul daqiiqaddii ugu dambeysay warkan. .. Mashruuca Channel Istanbul wuxuu la kulmayaa horumarro cusub. In kasta oo rabitaanka shirkadaha Shiinaha uu kordhayo mashruuca, cadaadiska Mareykanka ayaa weli ku sii jiraya mashruucan oo lagu fulin doono Iskaashiga Gaarka ah ee Dadweynaha.
Taariikhda Qandaraaska Channel Istanbul waxaa lagu shaacin doonaa Sanadka 2020?
Taariikhda qandaraaska ee Kanal Istanbul wali ma cadda kahor dhammaystirka 2019. Rajada sanadka 2020 ee qandaraaska ugu dambeeya ee mashruuca ayaa miisaan culus yeeshay.
Wadada Kamaal ee Istanbul ee Wadadii Ugu Dambeysay
Mashruuca Kanal İstanbul wuxuu ka bilaaban doonaa Yeniköy wuxuuna raacayaa Sazlıdere Dam wuxuuna kula kulmi doonaa Marmara dhanka Küçükçekmece Lake. Xaaladaha juquraafi ahaaneed ayaa la qaddariyay markii la go'aaminayo wadada saxda ah ee Kanal Istanbul, halkaas oo wararka xanta ah ee ku saabsan wadadaas laga soo gudbiyo luuqad ahaan luuqad ahaan bilo.
Macluumaadka Farsamo ee Mashruuca Kanal İstanbul
Mashruuca Kanal ee Istanbul si uu u ilaaliyo Istanbul
Mashruuca Channel Istanbul Project BOT ayaa la filayaa in lagu xaraashiyo bilaha 2